मलाई जन्मदिनको शुभकामना! | Martech Zone
मलाई जन्मदिनको शुभकामना!
बुधबार, अप्रिल 19, 2006 शनिबार, अक्टोबर 20, 2018 Douglas Karr
ExactTarget काम गर्न को लागी एक महान ठाँउ हो!
आज बिहान मेरो खाजा साथीहरू / सहकर्मीहरू / सह-पति / पत्नीहरूले एक राम्रो सजाइएको पोडको साथ मलाई चकित गरे। जन्मदिन कन्फेटी (मेरो कुञ्जीपाटीमा कुनै प्राप्त नगर्न होशियार), जन्मदिनको शुभकामना रिबन, एक एक्सप्रेसो मेसिन (!!!) को साथ पूरा गर्नुहोस्, डा। ग्रिप जेल फाइन पोइन्ट पेन, एक्सपो ड्राई इरेज मार्कर चुम्बकीय कोष्ठक र इरेजरको साथ टिपमा, र एक "यात्रा गर्न" स्टेन रिमूभर (किनकि म जहिले पनि खाजाबाट मेरो शर्टमा केहि ड्रपको एक थोपा लिएर फर्कन्छु)।
तपाईं भन्दा यो भन्दा राम्रो जन्मदिन हुन सक्दैन! (जबसम्म म घर पुग्दैन र मेरा बच्चाहरूले मलाई मेरो 'ओभर हिल' मैनबत्तीले मेरो केक खुवाउनुहुन्छ!)। गीज, म अहिले सम्म 40० पनि भएकी छैन!
टैग: जन्मदिनdouglas karrprectargetकार्यालय
जाभास्क्रिप्टको साथ मिति पोष्ट गर्नुहोस्